Obbo Daraaraa Maatii: ‘Tokkummaa’uun ADO fi ODP haala barbaadamuun hin milkoofne’ - Kichuu
HomeAfaan OromooNewsObbo Daraaraa Maatii: ‘Tokkummaa’uun ADO fi ODP haala barbaadamuun hin milkoofne’
Dhaabni ADO fi ODP’n walitti makamuun tokkummaan waliin hojjechuuf walii haagalan malee booda akkaataa waliigaltee jalqabaan hin raawwatiin hafe jedhan qondaalli duraanii dhaabichaa.
(bbcafaanoromoo)—Miseensa Koree Hojii Raawwachiiftuu ADO kan turaniifi hundeessaa paartichaa keessaa tokko tahuu kan himan Obbo Daraaraa Maatii kanaanis dhaabichi ‘tasa du’e’ jechuun ibsaniiru.
Dhaabni Oromiyaa bulchu, ODP, fi dhaabni Obbo Leencoo Lataatin hogganamu, Adda Dimookiraatawaa Oromoo (ADO), Sadaasa bara 2018 tokkoomuu isaanii miidiyaaleef ibsaniiru.
ODP’n dhaaba mormituu ADO waliin tokkoome
Obbo Daraaraa Maatii garuu waliigalticha booda tokkuimmaa’un rakkoo waan qabuuf namni barbaade dhuunfaadhaan miseensa ODP tahuun akkuma walitti makamne ‘fakkeesinee’ hojjenna malee tokkummaa’uun sun hin raawwatu jechuun ODP’n yaada dhiyeesse jechuun dubbatu.
Rakkoon dhaabni ODP kaase waan madaala kaasu hin turre jechuun himatu Obbo Daraaraan.
Sunis kan raawwatu namoota muraasa ADO biyya keessa jiran waliin malee kanneen biyya alaa jiran hin dabalatu jedhu.
Miseensotnii fi hoggansi alatti hafes yaadichatti walii hin galle jechuun dubbatu.
Kanumaan jilli biyyatti marii haa xumuraniif ergines achumatti miseensa tahuun waliin hojjechuuf walii galuun Adoolessa 21 wal gahii karaa teeleekonfiransii taasifanneen paartichi ifatti diigamuun murtaa’e jedhan.
Guyyaa sanaa eegalee paartiin ADO jedhu biyya keessas biyya alaas hin jiru jedhan.
”Kanaafidha ADO’n tasa du’e kaniin jedheef”
Dura taa’aa ADO kan turan Obbo Leencoo Lataa ammoo akkaataadhuma jalqaba waliigalleen raawwanne jedhu.
Amma paartiin ADO jedhamu akka hin jirres murteessanii jalqabuma iyyuu kan waliin dubbanne warri biyya keessa jiru ODP waliin hojjechuuf kanneen ala jiraatan ammo miseensa tahuun akka deeggaraatti akka iti fufan ture jedhan.
Dhuunfaadhaan miseensa tahaa malee tokkummaa’uun kun rakkoo waan qabuuf raawwachuu hin danda’u jechuun ODP’n yaada dhiyeesse kan jedhus inuman dhagahaa ture garuu walitti makamnee jirra jedhanii deebisan Obbo Leencoon.
‘Bilisummaan bara jireenya kootti galma ni gaha jedhee hinyaadu’
Warri biyya alaa jiranis biyya keessatti nu waliin turanii hojjechuun bakka qajeeluu qabu qajeelchuun bakka irratti wal dhaban irratti ammoo murtoo fudhachuuf humnas beekumsas qabu ture garuu kanas hin goone jedhan.
Ammas namni naaf hin taane jedhe wal gahii waamee diigee murtoo mataa isaa fudhachuuf mirga qaba jedhanii ani guyyaa tokkummaa’uun sun raawwate irraa kaaseen soorama bahe jedhan.
Amma paartiis hin qabu. Hojii paartiis kallattiidhaan hojjechaa hin jiru jedhan.
Jila Biyyatti ergamee fi yaada ODP waliin tokkummaa’uu
Waamicha paartilee ala taa’uun qabsoo gaggeessaniif bulchiinsi MM Abiy Ahimed taasisaniin paartilee hedduun gara biyyaatti deebi’aniiru.
Sana duras osoo addaan hin kutiin akka ADOtti gara biyyaatti gallee qabsoo gaggeessuuf mootummaa Itiyoophiyaa waliin waggoota shaniif marii taasisaa turre jedhan Obbo Daraaraa Maatii.
Haa tahu malee, sun osoo hin milkaa’iin hafee erga MM Abiy Ahimed aangootti dhufanii jila tokko Biyyoota Arabaa Gamtoomanitti erguun achitti mari’achuun kan hafe ammo biyya keessatti xumurra jennee waliigalle jedhan.
‘ADWUI’n laafeera jettanii hin dogoggorinaa’ MM Dr. Abiy
Kanumaan jila Obbo Leencoo Lataan durfamu gara Biyyaatti erguun haala akkamiin akka paartii tokkootti seeraan qabsaa’uu akka dandeenyu irratti mootummaa waliin marii jalqabame xumura akka itti godhaniif murteessine jedhan Obbo Daraaraa Maatii.
Haa tahu malee, jilli ergine kun haala irratti waliigalle dhiisuun ODP waliin makamanii hojjechuun filmaatadha yaada jedhu dhiyeessan jedhan.
Haalli qabsoo ODP kan keenya waliin hedduun isaa waan wal fakkaatuuf itti makamne isaan deeggarra.
Yoo isaan milkaa’aan akka qabsoon paartii keenyaa ADO milkaa’etti ilaalla jechuun jilli biyya gale yaada dhiyeessuu himan.
Koreen Hojii Raawwachiiftuu paartichaa fi Koreen giddugaleessaa gabaasa nuuf dhiyeessan irratti mari’atee booda akka tokkuumnu waliigalle jedhan.
Bara 2013 namoota duraan hoggansaa fi miseensota ABO turaniin Ameerikaa Miniyaapoolisitti qabsoo karaa nagaa gaggeessina jechuun paartiin ADO kun hundeeffamme jedhan Obbo Daraaraa Maatii.
Isaan keessaa hogganaa paartichaa kan tahan Obbo Leencoo Lataa, Diimaa Noggoo fi Leencoo Baatii keessatti argamu.
Erga hundeeffama isaa irraa eegalee biyya keessa galuun qabsoo karaa nagaa taasifamu irratti hirmaachuuf yaalii akka taasisaa turan kan himan Obbo Daraaraan bara 2015 keessas Obbo Leencoo Lataa waliin biyya seenun mootummaa Itiyoophiyaa waliin mari’achuuf yaalii gochuu isaanii BBCtti himan.
Haa tahu malee, bulchiinsi yeroo sana aangoo irra ture yeroo gabaabaa keessatti biyya gadhiisaa bahaa waan nuun jedhaniif osoo hin milkaa’iin hafe jedhan.
Amma haaromsa dhufetti ni amanna kan jedhan Obbo Daraaraan paartiin isaanii kun garuu osoo hin eegamiin yeroo ODP waliin tokko taanee hojjenna jennee eegaa turretti ”tasa du’e” jedhan.